लाेकबहादुरले किन लखेटी-लखेटी ५ जनाकाे हत्या गरे ? - Action Khabar - Nepali Online News Portal
लाेकबहादुरले किन लखेटी-लखेटी ५ जनाकाे हत्या गरे ?
६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको गत सोमबारको घटनामा स्थानीय चिनेजानेकै व्यक्तिको हात हुन सक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । सोही आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले लोकबहादुरलाई पक्राउ गरेको हो ।
लोकबहादुरले पनि व्यक्तिगत रिसीबीका कारण हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । हत्या गरिएका तेजबहादुरले केहि गर्न नसकेको भन्दै ‘हेपेका कारण’ आफूले आवेगमा हत्या गरेको आरोपी लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन् ।
- २७ भाद्र २०७८, आईतवार ०७:०४ मा प्रकाशित